मधेशलाई सबै राजनीतिक दलहरुले कमाइ खाने भाँडो बनाए : सिके राउत – सजल सन्देश
मधेशलाई सबै राजनीतिक दलहरुले कमाइ खाने भाँडो बनाए : सिके राउत
By Sajal sandesh	 On४ मंसिर २०७६, बुधबार ०३:२५
काठमान्डौ – जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मधेशलाई अहिलेसम्म सबै राजनीतिक दलहरुले कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको आरो०प लगाएका छन्।
राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीद्वारा मंगलबार महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै डा. राउतले अहिलेसम्म विजय भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले मधेशलाई बासमती चामल र रहु माछा आयात गर्ने ठाउँको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको आरो०प लगाए।
उनले जनताले मत दिएर विजय बनाएको मधेशवादी दल नेतृत्वको प्रदेश दुईको सरकार समेत त्यसमा पछाडी नरहेको आरो०प लगाए।
भारतले नेपाली भूमिमा मन्दिर बनाउन दिएन
यि हुन् अमेरिका र जापानबाट ‘एमडी’ गरेको भन्दै बिरामी ठग्ने नक्कली डाक्टर !